Fampiharana 7 tsara indrindra mandoa vola amin'ny fandehanana | Download amin'ny Android
App tsara indrindra
Fampiharana 7 tsara indrindra handoa vola anao
Alaivo sary an-tsaina hoe miaina ao anatin’ny tontolo iray izay andraisan-karama ianao handeha na hihazakazaka. Andraso fa misy! Eny, noho ny smartphones, ankehitriny dia afaka mampiasa fampiharana sasany mandoa vola anao izahay mba handehanana sy hahazoana vola manao izay tianao indrindra.
Na dia tsy tia mihazakazaka aza ianao, ny volafotsy sasany dia mety ho fandrisihana tsara hanombohana.
Ao amin'ny lahatsoratra izay hatolotray anao manaraka, ianaro momba ny fahasamihafana fampiharana handehanana izay manampy anay hahazoam-bola, koa amin'ity famerenana ity dia milaza aminao ny antsipiriany rehetra momba ny safidy tsara indrindra amin'ny tsena. Aza mitsahatra mahafantatra azy ireo!
Miaraka amin'ny fampiharana Lympo, ara-bakiteny karamaina ianao mba hanana fomba fiaina salama sy salama. Ity fampiharana mahavariana ity dia miasa miaraka amin'ny rafitra vola madinika antsoina hoe LYM Tokens, izay azonao raisina rehefa mamita ireo fanamby sy programa fanofanana isan-karazany ianao.
Aza manahy, tsy ho sarotra be ny fanazaran-tena amin'ny voalohany, saingy hitombo amin'ny farany rehefa mandroso amin'ny fotoam-pivoriana ianao. Misy valisoa azonao, ohatra, raha mandeha avy any an-tranonao mankany amin'ny trano fisakafoanana iray ao an-tanànanao ianao.
La fitaovana dia natao hanentanana anao hanao fanatanjahan-tena isan'andro amin'ny alàlan'ny fanonerana ny vola ataonao mandritra ny andro.
Raha toa ka tsy afaka mihazakazaka noho ny olana ara-batana ianao dia manana safidy ny mandeha an-tongotra fotsiny ary hahazo valisoa ihany koa ianao.
Arakaraka ny halavan'ny fitetezam-paritra ataonao, dia vao mainka mahazo vola ianao. Ampiasao amin'ny zavatra tsotra indrindra izany, raha handehandeha eny amin'ny toeram-pivarotana ianao dia afaka mampiasa ny fampiharana hahazoana vola rehefa miala voly. Tsotra izany!
Tsy tapitra hatreo anefa izany satria, rehefa mandeha ianao, Lympo dia hametraka tanjona vaovao ho anao ary ho sarotiny kokoa aminao ny mametraka fanamby sy mahazo vola be.
Ankehitriny, amin'ity faritra manokana ity, ny LYM Tokens dia azo ampiasaina ao anatin'ny fampiharana iray ihany mba hividianana fitaovana fanatanjahan-tena, kiraro na akanjo, ary koa satroka sy kojakoja avy amin'ny marika ambony.
Noho ny poketra izay ananan'i Lympo, afaka mahazo vola tsotra sy haingana ianao. Na dia azonao atao aza ny manakalo azy ireo amin'ny karatra fanomezana Amazon na ao amin'ny App Store.
JEREO AO AMIN'NY GOOGLE PLAY
Ny fampiharana hatolotray anao izao dia Runtopia, izay hanome anao fahafahana maro kokoa, azo antoka izany.
Hanomboka amin'ny fanazavana ny tombontsoa lehibe sy mahasoa indrindra ananan'ny mpampiasa izahay: manolotra safidy isan-karazany hanavotana ny vola nomerika azonao amin'ny fampiharana, na dia dolara tena izy amin'ny alàlan'ny PayPal.
ihany koa afaka mandray anjara amin'ny loka ara-batana ianao toy ny finday Samsung Galaxy, famantaranandro Apple Smartwarches. Azonao atao mihitsy aza ny misafidy fitaovana ara-panatanjahantena sy kojakoja ho an'ireo tia hazakazaka mihazakazaka, zavatra izay azo antoka fa handrisika anao.
Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ny fampiharana dia hanome valisoa anao amin'ny loka samihafa izay hanampy amin'ny fanovana ny fiainanao ho mahafa-po kokoa. Ny Runtopia dia hanohana anao hiditra amin'ity tontolon'ny fanatanjahantena ity miaraka amin'ny antony manosika ambony indrindra tokony hananana mpihazakazaka.
Amin'ny fomba fiasa, Runtopia dia miasa mitovy amin'ny Lympo, satria mamela anao manolotra drafitra fanofanana isan-karazany sy fanamby tsy maintsy raisinao. Ny fitaovana dia hitarika anao hatrany am-piandohana ary hanampy fanazaran-tena vaovao rehefa mandeha ianao.
Raha ny marina, misy vondrom-piarahamonina mpihazakazaka marobe mampiasa ny fampiharana ary afaka mifandray amin'izy ireo ianao mba hampitaha ny zava-bita sy ny valisoa. Azonao atao koa ny mampifanaraka ny angon-dry zareo amin'ny anao, ankoatra ny zavatra hafa.
Tsy manana fahalalana momba ny fanazaran-tena? Ny fampiharana dia hanome anao ny torolàlana feno toy ny hoe mpampiofana anao manokana izany.
Izy io dia hanitsy anao raha manana fahazaran-dratsy ianao rehefa mihazakazaka ary hilaza aminao ny dingana tokony hataonao hanatsarana, noho ny rakitra voatahiry rehefa vita ny hazakazaka. Saingy afaka mampita izany aminao amin'ny fotoana tena izy raha manapa-kevitra ny hampiasa ny écouteur ianao rehefa miofana.
Raha miresaka angona, ny fampiharana dia handrakitra ny tanjonao sy ny tanjonao. Ho fantatrao ny lanja very, ny kaloria nodorana, ny hafainganam-pandeha, ankoatry ny zavatra lehibe hafa ho hitanao amin'ny fampiasana tsy tapaka.
Si matetika ve ianao manao fanazaran-tena mihazakazaka na fiaran-dalamby, fantatrao angamba ny atao hoe pedometer. Fa raha tsy fantatrao izany dia fitaovana na fitaovana ahafahantsika manisa ny dingana rehetra ataontsika. Ary amin'ny Sweatcoin dia afaka manao toy izany koa isika amin'ny alàlan'ny smartphone.
Ny tena zava-dehibe amin'ny app mandeha dia izany handoa anao noho ny dingana nataonao, na dia manao fanatanjahan-tena ao an-trano ianao na amin'ny lalao baolina kitra miaraka amin'ny namanao na ny fianakavianao. Hiampy ny fitsangatsanganana rehetra!
Izany dia noho izany, Sweatcoin dia handoa vola nomerika mitovy anarana aminao, izay ahafahanao mividy zavatra maro amin'ny alàlan'ny fivarotany na Marketplace.
Araho ny drafitry ny fiofanana ary ho lasa olona mavitrika! Araraoty ny tombontsoa rehetra, ka izany no izy raha mandeha any amin'ny fivarotana fotsiny ianao na mandehandeha miaraka amin'ny namana dia ampiasao ny app ary mahazo vola tsy tonga saina.
Ny fampiharana misy firaketana izay hilaza aminao hoe firy ny dingana vitanao nandritra ny andro. Mba hahasoa bebe kokoa ny traikefa dia manoro hevitra izahay ny hampifandray ny fampiharana amin'ny famantaranandro marani-tsainao, izay hanana fitsapana marina kokoa.
Feno vokatra ny fivarotana tafiditra ao amin'ny app sy tolotra hanavotana. Toy ny akanjo, fanampin-tsakafo, fitaovana nomerika na fitaovana, ankoatra ny safidy hafa.
ihany koa hanana fahafahana hanome ny volanao ho an'ny asa soa ianao, mba hahafahanao mampiasa ny fiofananao ho amin'ny tanjona altruista. Ampio olon-kafa rehefa lasa olona salama kokoa!
Ny iray amin'ireo fampiharana mandeha an-tongotra izay handoa vola anao dia ny Ufity, tolo-kevitra izay miteraka na dia amin'ny asa ataonay aza. Aza adino ny fahafahana hanova ny asa ara-batana ho tombony.
Mba ho voafaritra kokoa, ny sehatrao dia hanisa ny dingana rehetra ataonao amin'ny andro, raha mbola misokatra ny fampiharana.
manavaka tsy mila miofana na manao exercice ianao. Eny ary, miakatra na midina tohatra, mandehandeha manodidina ny manodidina anao na mitety toeram-pivarotana, dia afaka mahazo vola ianao. Izay azonao havotana amin'ny vokatra sasany.
Raha toa ianao ka olona mifaninana, manana solaitrabe misy mpifaninana tsara indrindra ilay fitaovana. Ka raha olona te ho laharana 1 ianao dia araho ny drafitry ny fiofanana ary mihazakazaka isaky ny azonao atao mba ho mpandresy.
Na dia voafetra be aza ny fivarotana izay ananan'i Ufity raha oharina amin'ireo atolotry ny fampiharana hafa, dia mendrika hojerena izany satria misy kojakoja lehibe azo alaina.
Mety ho tompon'ny akanjo fanaovana fanatanjahan-tena vaovao ianao, famantaranandro maranitra, tsihy yoga ary loka hafa izay hanampy amin'ny fampihetsehana ny fiainanao.
Izy io dia fampiharana mety tsara ho an'ny olona manao fanatanjahan-tena izay tsy maintsy mandehandeha. Raha manokan-tena ho an'ny iray ianao, na manao fanazaran-tena baseball na baolina kitra, na any amin'ny teatra na kilasy dihy.
Azonao atao foana ny manetsika ny fampiharana ary mamela azy hanisa ny dingana rehetra hahazoanao vola mora foana. Tsarovy, karamain'izy ireo ianao hifindra, zavatra ataonay maimaimpoana isan'andro.
Fa na dia manao fanatanjahan-tena any an-trano aza ianao, dia hahazo fidiram-bola izay hanampy amin'ny karamanao. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, afaka mahazo vola ianao nefa tsy mila mivoaka ny tranonao.
Recommended raha mijanona ao an-trano ianao Neny Iza no nahafantatra fa ny fanenjehana ny zanakao dia afaka manampy anao hahazo vola?
Azonao atao ny mahazo Ufity amin'ny Play Store amin'ny telefaona Android anao. Ny ampahany tsara indrindra dia tsy maka toerana be izy io, satria latsaky ny 7 MB ny lanjan'ny app. Inona no fialan-tsiny aminao amin'ny tsy fanananao azy? Ataovy ho salama kokoa ny fiainanao!
Tsara foana ny manandrana fampiharana izay mandoa anao handeha tahaka an'i Yodo, satria Ho fanampin'ny fanampiana antsika hampihena lanja na hiofana dia afaka manangona vola isika.
Eny, ny fampiharana dia hamela anao hanavotra ny teboka rehetra amin'ny vola tena izy mba hanananao fahafahana maro kokoa handany ny vola azonao araka izay tianao.
Ho fanampin'izany, manolotra antsika drafitra isan-karazany hodinihina rehefa mampiasa azy io, na te hanao fanatanjahantena ianao na mandeha an-tongotra na mihazakazaka fotsiny.
Ny fitaovana dia manana fanadinana manan-tsaina tohanan'ny tobim-pitsaboana. Tena amin'ny antsipiriany izy io, hanara-maso anao mialoha, mandritra ary aorian'ny fanazaran-tena.
Amin'izany fomba izany, dia hanome anao ny tolo-kevitra tsara indrindra mifanaraka amin'ny tanjonao izy io ary mitazona firaketana feno momba anao.
Noho ny tatitra amin'ny antsipiriany, azonao atao ny manamarina ny tosidra sy ny haavon'ny saturation oksizenina.
Raha misy zavatra ivelan'ny mari-pamantarana, dia hampahafantarina anao amin'ny alàlan'ny fampiharana izany. Ny tsara dia afaka manao izany isan'andro ianao ary mahafantatra raha ao anatin'ny normal ianao, ambany na ambony.
Raha manana famantaranandro maranitra ianao dia hanana fandinihana ny pulsations amin'ny hatotananao, izany no fomba tsara indrindra hahafantarana raha mitaky be loatra ny fanazaran-tena na raha mandeha amin'ny hafainganam-pandeha tsara ianao.
Ary raha tsy ampy izany, Yodo dia tonga miaraka amin'ny pedometer izay handrakitra ny dingana rehetra ataonao amin'ny fomba marina sy marina.
Ny ankamaroan'ny naoty sy fanehoan-kevitra voarain'ny mpampiasa azy dia manamarina ny fahombiazany, ka tsy hahita olana ianao rehefa mirakitra ny fandrosoanao.
Mahatsiaro ho manirery ve ianao rehefa manao fanatanjahan-tena? Indraindray dia mora kokoa ny manofana sy mampahery ny tenanao isan'andro raha miaraka aminao. Yodo dia afaka mahita olona akaiky anao izay mampiasa fampiharana mitovy ary ho afaka hivory hiresaka izy ireo rehefa mandeha an-tongotra.
Fanampin'izany, manana safidy ianao hamorona ny drafitry ny fiofanana sy ny fanao isan'andro, mba ho lasa sehatra "all-in-one" ho an'ny fampiasana isan'andro.
Ary manohy ny iray amin'ireo fampiharana mandeha an-tongotra izay na dia dia mifandray amin'ny Amazon. Tsy mitovy amin’ireo teo aloha anefa izany, izay nohazavainay nandritra ny lahatsoratra.
anefa Ny Step Younger+ dia manana pedometer tsirairay avy, satria hanisa ny dianao sy ny fihetsehanao rehetra amin'ny fiofanana na hetsika ara-panatanjahantena. Manana fomba valisoa hafa koa izy io izay mampiavaka azy amin'ny fitaovana hafa amin'ity lohahevitra ity.
Ny tena zava-dehibe dia tsy ny dingana no handoa anao, fa ny lalao interactive misy rehefa manao fanazaran-tena ianao. Ireo no tena hahazoanao vola hanavotana fanomezana na karatra Amazon.
Raha ny marina, Step Younger + dia hampiseho anao piozila, ankamantatra ary fanamby rehefa mihazakazaka na jogging ianao, ary araka ny fahaizanao mamaha olana rehefa sahirana ianao, dia ho afaka hahazo sy hamokatra tombony ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny fitaovana dia hanome anao tetika samihafa rehefa manao fanatanjahan-tena sy mihinana drafitra hanatsarana ny sakafonao tsy mitsahatra misakafo. Ny fandrosoana rehetra ataonao dia horaketina amin'ny tatitra ary ho hitanao ny vaovao momba ny hoe hatraiza ianao amin'ny valisoa lehibe.
Ny mekanika amin'ny fampiharana dia ahafahanao manomboka manisa ny dingana rehefa tianao ary mampiato azy ireo rehefa vonona ny hijanona ianao.
Amin'ny alalan'ity fomba ity dia ho fantatrao ny habetsaky ny fiofananao nandritra ny andro sy ny habetsahan'ny kaloria nodoranao tamin'io fotoana io.
Ankoatra ny zava-drehetra, ny fampiharana ihany koa manao latsa-bato isan'andro amin'ny alalan'ny roulette azy manokana, ary koa ny loka sasany ho azonao isaky ny manatratra iraka na mamita ny tanjonao amin'ny fiofanana ianao, ka mendrika ny manandrana izany.
Mamarana ity lisitry ny fampiharana ho an'ny fandehanana ity, tianay ny hamarana amin'ny firoboroboana ary noho izany dia hanolotra anao izahay iray amin'ireo tsara indrindra ao amin'ny Play Store antsoina hoe StepBet.
Ho fanampin'ny fandoavanao handeha an-tongotra, ny fitaovana dia hampiseho anao paikady fanofanana samihafa hanatsarana ny toe-batanao.
Ny iray amin'ireo endri-javatra miavaka indrindra dia izany afaka miloka vola ianao. Marina izany, ity fampiharana ity dia hamoaka fanamby ombieny ombieny izay ahafahanao manatevin-daharana ireo mpampiasa hafa hahazoana vola.
Ohatra: Amin'ny fahavaratra dia hanana fanamby mandritra ny 6 herinandro ianao izay hiloka vola mba hahazoana vola be kokoa, saingy hifaninana amin'ny olon-kafa ianao mba hahatratrarana ny tanjonao!Mifalia, fanamby ary mahazo vola amin'ireo lalao ireo!
Toy izany koa, azonao atao ny mampifanaraka ny tanjonao isan-kerinandro tsikelikely ary tanteraho izy rehetra, manaova fanazaran-tena manokana miaraka amin'ny fomba fanao araka ny fomba sy ny fahaiza-manaonao.
Araka ny voalazanay teo aloha dia afaka miditra amin'ny lalao isan-karazany miaraka amin'ny fahazarana sariaka sy ara-pahasalamana ihany koa ianao hahazoana vola.
Amin'ny faran'ny herinandro, ny fampiharana dia hilaza aminao ny halaviran'ny dianao isan'andro ary hampiseho ny totalin'ny kilaometatra vitanao nandritra ireo fito andro ireo. Rehefa vitanao ireo fanamby manokana napetrakao ho anao, dia ho fantatrao ny vola azo voaangona nandritra io fotoana io.
Ampifandraiso amin'ny sakafo voalanjalanja ny fanazaran-tenanao ary alohan'ny hahafantaranao azy dia hampiseho ny vatanao amin'ny fahavaratra ianao!Hatsarao ny fiainanao ary araho izao drafitra fanazaran-tena mampiala voly izao! Aza mandany fotoana ary misintona ny fampiharana amin'ny bokotra izay ho hitanao eto ambany:
Ohatrinona ny vola azonao amin'ny fampiharana mandeha an-tongotra?
Azo antoka fa io no fanontaniana voalohany tonga ao an-tsainao rehefa miteny aminao izy ireo fa afaka mahazo vola amin'ireo fampiharana ireo ianao, saingy tsy misy valiny mazava. Satria ny vola azonao dia hitovy amin'ny ezaka ataonao amin'ny fanazaran-tena.
Ary koa, samy hafa ny fampiharana tsirairay. Ny sasany dia hanome anao isa maromaro hatakalo vola mifototra amin'ny habetsahan'ny dianao nandritra ny volana na herinandro. Saingy misy hafa izay hanangonanao raha tsy azonao atao ny manakalo azy ireo amin'ny fanomezana na loka.
Noho izany, manoro hevitra anao izahay hamaky ny fepetran'ny fitaovana tsirairay, manaova lisitry ny tanjona ary manontania hoe ohatrinona no azonao amin'izany ezaka izany.
Inona no fomba tsara indrindra hampiasana fampiharana mandeha an-tongotra?
Ny fomba tsara indrindra hioty tanteraka ny tombotsoan'ireo fampiharana ireo dia mamorona drafitra fanofanana. Jereo ny isa azonao amin'ny isan'ny dingana ataonao mandritra ny andro ary kajy ny isan'ny tsy maintsy ataonao isan-kerinandro mba hahazoana vola mahafa-po anao.
tsarovy aza manao mihoatra izay vitanao, satria hanimba ny fahasalamana no hiafarany, indraindray tsy midika ho tsaratsara kokoa izany. Raha vao manomboka ianao, dia manana safidy ny manampy zava-tsarotra kokoa tsikelikely, fa tsy misy zavatra mihoatra na mandreraka anao.
Ny torohevitra hafa omenay anao dia ny hoe apetraho ho avo foana ny fahamarinan'ny GPS, satria raha tsy izany dia mety tsy handrefesana tsara ny angona.
Ary farany, tadidio ny mahazo aina, raha tsy tianao ny feon'ny mpanazatra rehefa mihazakazaka ianao, dia azonao atao ny mamono azy ao amin'ny fikandrana.
Inona no ilainao hampiasana ireo fampiharana ireo mba handehanana?
Amin'ny ankapobeny, farafaharatsiny ho an'ireo fampiharana voalazanay nandritra ny fanoratana, mila telefaona android ahafahanao misintona sy mametraka ny fitaovana ianao.
Ny tena soso-kevitra dia ny manana a dikan-teny mihoatra ny 4.1, fa raha lehibe kokoa izy io, dia hanana karazany bebe kokoa ianao amin'ny resaka fampiharana azonao ampiantranoina amin'ny findainao.
Ireo fampiharana ireo dia tsy mandany toerana be amin'ny telefaona, noho izany dia tsy mila fitadidiana be ianao raha te hanana azy ireo, fa raha soso-kevitra fa mihoatra ny 8 GB, raha te hanana mihoatra ny iray ianao miaraka.
Na dia tadidio aza fa tsy azonao atao be loatra ny telefaona finday satria mandeha miadana kokoa ary ho simba haingana ny bateria.
Tsy takiana izany, fa mety tsara sy mahomby kokoa raha manana famantaranandro maranitra ianao izay hifandray amin'ny findainao. Amin'izany fomba izany dia ho marina kokoa ny angon-drakitra ananan'ny tatitra amin'ny faran'ny andro.
Ny zavatra iray hafa tokony hanananao dia ny akanjo fanatanjahan-tena mifanaraka tsara sy mahazo aina, satria amin'ny akanjo mety dia mety ho afaka mandeha lavitra kokoa ianao.
Nahoana no mametraka fampiharana handehanana?
Tsy noeritreretinay mihitsy fa ho avy ny handoa vola anao handehanana fotsiny, izany dia mampiseho amintsika fa efa mandroso izao tontolo izao ary ny fomba nanamora ny fiainan'ny olombelona ny teknolojia. Mandray anjara betsaka amin'ny fahasalaman'ny olona ireo fampiharana ireo, mahatonga azy ireo ho mavitrika sy ho salama kokoa rehefa mihazakazaka.
Ny tombony dia mihatra amin'ny taona rehetra na ny lahy sy ny vavy: Raha mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ianao dia azonao atao ny manolo ny dia amin'ny fiara fitateram-bahoaka ary mihazakazaka mankany amin'ny oniversite misy anao na raha zokiolona ianao dia ampio ny fandehanana an-tongotra amin'ny fomba fiainanao. Na iza na iza, ny fampiharana dia hamaly soa ny ezaka ataonao.
Tsy mila manokana ora maro isan'andro ianao fa afaka manamaivana sy manatanteraka ny fotoana tianao, mila hery sy fanoloran-tena fotsiny ianao rehefa te hanatratra ny tanjona napetrakao ho an'ny tenanao amin'io herinandro io.
Ny valisoa dia hanome anao motivation rehefa te hiala amin'ny fandriana ianao ary hanao hetsika ara-batana bebe kokoa.
Na dia tsy manam-potoana hanaovana fanatanjahan-tena aza ianao, dia tsy fialan-tsiny ny tsy hisintona azy ireo. Azonao atao ny manetsika ny fampiharana rehefa manao dia an-tongotra mandritra ny andro ianao, na rehefa miantsena ianao na rehefa mandehandeha miaraka amin’ny namanao.
Ny fitaovana dia tsy manontany hoe inona no toe-javatra tokony hisy anao raha te-hahazo vola ianao, ny hany zavatra horaisinao dia ny isan'ny dingana nandehananao.
Manomboka mihena lanja sy mihena matavy rehefa mahazo vola, mifandray amin'ny hafa mba hahatratrarana tanjona tsara, manavotra vola virtoaly amin'ny karatra fanomezana Amazon sy App Store.
Mandraisa anjara amin'ny fisarihana hahazoana akanjo, kojakoja na fitaovana ara-panatanjahantena, ankoatra ny zavatra maro hafa azo atao noho ny fampiharana izay mandoa anao handeha izay atolotray anao amin'ity famerenana ity.
Hahazo tombony tsara ianao amin'ny fanaovana izay mahasoa anao be dia be, dia ny hetsika ara-batana. Mety hanontany tena ianao raha tena miasa tokoa izy ireo. Ary ny marina dia eny, ary mandoa koa izy ireo.
Na dia misy aza ny fampiharana sasany izay tsy dia marina loatra raha oharina amin'ny hafa momba ny fandraketana ny vola miditra, ny mpampiasa dia nanome marika ambony ny rafitr'izy ireo ka izao no asongadina ao amin'ny lahatsoratra.
Rehefa avy nanandrana azy ireo ary nahazo vola dia lazao anay ao amin'ny fanehoan-kevitra ny fomba niainanao tamin'ny Apps ho an'ny fandehanana. Maka fahafinaretana!
Araho izahay amin'ny YouTube.
Ireo fepetra amin'ny fifanarahana ankapobeny
Copyright 2019 - 2022 | BestApp | Zo rehetra voatokana
YouTube-milalao LinkedIn Facebook Pinterest YouTube RSS amin'ny twitter Instagram Facebook-banga rss-banga linkin-blank Pinterest YouTube amin'ny twitter Instagram